एचकेनेपाल डट कम - HKNepal.com - First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
हङकङमा जन्मेकी ब्रिटिश गोर्खाकी छोरी मिस इंगल्याण्डमा
नेपालीहरु जहाँ रहे पनि जहाँ गए पनि आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको लागि केही न केही गरिरहेका हुन्छन्। यस्तैमा एउटा उदाहरण हुन् नेपालकी छोरी प्रतिष्ठा राउत। हङकङमा जन्मेकी ब्रिटिश गोर्खाकी छोरी प्रतिष्ठा अहिले मिस इंगल्याण्ड २०१९ सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी हुदैछिन्। यतिबेला उनी मिस इंगल्याण्ड फोटो हिटमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छिन्। थप जानकारी भिडियोमा…
धमलाकै अगाडि ओलीको यस्तो हमला, प्रचण्ड परे चकित!
‘धमलाको स्वभाव छ हमला गर्ने, भन्नोस् त्यो किन भएन?’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जब ऋषि धमलाको अगाडि उनकै क्यारिकेचर गरेपछि कार्यक्रममा सहभागी सबै गलल हाँसेनन् मात्र, ताली पनि मजाले बज्यो। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमाल दाहाल प्रचण्ड पनि ओलीको अभिव्यक्ति सुनेर कुम हल्लाउंदै हाँसे। थप जानकारी भिडियोमाः विस्तृतमा…
खानेपानी मन्त्री बिना मगरलाई किन लाग्यो यति ठूलो झट्‌का ?
मन्त्री भएकै बेला विना मगरको पूर्वपति शंकर अधिकारी पक्राउ परेका हुन्। कुनै बेला माओवादीमा छंदा बिना मगर र शंकर अधिकारी प्रेम सम्बन्धमा थिए। दुबैजनाले ०६६ सालमा प्रेम विवाह गरेका थिए । शंकरसँग वैवाहिक जीवनमै रहेका बेला बिना मगर अर्का पुरुषको प्रेम जालमा पर्दै गइन्। ती पुरुष थिए प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहाल। थप भिडियोमा…
Tweets by @HKNepal
Trending Now : कोलोराडोबाट नेपाल गएर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका श्रेष्ठलाई भव्य सम्मान